Kedu ihe kpatara Chesapeake Bay Retriever ji bụrụ onye a hụrụ n'anya? - Reeddịrị
Kedu ihe kpatara Chesapeake Bay Retriever ji bụrụ onye a hụrụ n'anya?
Chesapeake Bay na-ewepụta abụwo nkịta onye ọkụ azụ na-ahọrọ kemgbe ihe karịrị otu narị afọ. N’ịjikọta ịdị nkọ, ntachi obi, na nchebe, nke a bụ nnọọ otu ezigbo nwa.
Na mbido ya, akpọrọ canines ndị a Brown Winchester, Red Chester, na Chesapeake Bay Ducking Nkịta . Taa, Chesapeake Bay Retriever na-agafe Chessie ma ọ bụ CBR , maka nkenke.
Yabụ kedu ihe banyere Chessies na-eme ka ha bụrụ ihe ewu ewu n'etiti ndị ọrụ mmiri? Ka anyị chọpụta!
Kedu ihe bụ Chesapeake Bay Retriever?
Kedu ihe onye Chesapeake Bay Retriever dị?
Ndi Chesapeake Bay na-eweputa nkịta ezi ezinụlọ?
Ilekọta Cheripeake Bay Retriever
Ndi Chesapeake Bay Retriever nwere ahụ ike?
Ego ole ka a Chesapeake Bay Retriever na-eri?
Chesapeake Bay Retriever megide Labrador Retriever
Ndi Chesapeake Bay na-agbanwe agbanwe ga-esonye na mkpọ gị?
Ọ bụrụ na ị nwetụla oge oyi na mgbago ugwu ọwụwa anyanwụ US, ị maara na 'oyi' bụ nkwupụta okwu. Nke a bụ eziokwu karịsịa maka ụsọ oké osimiri ebe ugwu, ebe ikuku na-ekpo ọkụ na mmiri bụ ebe a na-ahụkarị.
Ọ bụ n'etiti ọnọdụ ndị a na-agbanwe agbanwe Chesapeake Bay Retriever bịara.
N’afọ 1807, otu ụgbọ mmiri ndị England kụkpọrọ n’akụkụ ụsọ mmiri nke Maryland. N'ime ndị a napụtara bụ mmadụ abụọ Newfoundland ụmụ nkịta.
Mgbe ndị ọkụ azụ nọ na mpaghara hụrụ ọkwa azụ ụmụ azụ, ha bidoro ịzụlite nkịta ha na Newfoundlands. Ka oge na-aga, njikọ a na-enye Chessie nke oge a.
Chesapeake Bay Retriever ghọrọ onye ama ama ngwa ngwa maka ya weghachite ikike na o yiri ka ike adịghị agwụ agwụ . A maara ụfọdụ n'ime canines ndị a ka ha na-enweta ọtụtụ narị ọbọgwụ kwa ụbọchị!
Ka ọ na-erule afọ 1885, CBRs ghọrọ onye AKC kwenyere na ya (American Kennel Club), na-eme ka ọ bụrụ otu ụdị nkịta ndị edeturu aha na US. N'ihe dị ka afọ 100 mgbe nke ahụ gasịrị, Maryland kwupụtara Chesapeake Bay Retriever nkịta steeti ya.
Otutu udiri anumanu nwere otutu nkwuputa amara dika Chessie!
Na-ele anya na ihu ihe yiri ụlọ ọrụ CBR, ụdị ntanetị ha ga-emetụ gị n'ahụ amba ma obu odo odo . Ha nwere triangular, ntị na ntị na ogologo nke. A na-eme akụkụ ndị ọzọ fọdụrụnụ maka ịrụ ọrụ mmiri.
Ha ụkwụ ụkwụ na ogologo azụ mee ka ndị Chessies nwee ike igwu mmiri megide ifufe na ebili mmiri ruo ọtụtụ awa na njedebe.
Abịa na-enyere aka bụ nke a retriever si obosara obi na ogologo ma ọ bụ na-ejighị ya kpọrọ curled ọdụ. Ihe abụọ ndị a na-enyere Chessies aka ịgagharị na imegide akụkụ nke ice.
Chesapeake Bay Retrievers nwere mmanu mmanu, ubé wavy aji , nakwa. Uwe ha mepụtara n'ụzọ pụrụ iche na-enyere ha aka ịmụrụ ọkụ n'oge mmiri mmiri. Ọ na-amịkọrọ mmiri mmiri, na-eme ka CBRs na-enweghị mmiri na-eguzogide mmiri.
Iji bulie ihe niile elu, a na-ekpuchi Chessies n'ụdị mkpuchi ozu canine. Uwe ha nwere n'ụdị dị iche iche agba aja aja, sedge, na deadgrass . Ha na-enwekarị otu agba siri ike, ma ha nwere ike ịmachi ihe na-acha ọcha n’obi ha ma ọ bụ n’ukwu ha.
Olee nnukwu bụ ndị agbapụta Chesapeake Bay?
Chessie tozuru oke abụghị ọkara pint. Malesmụ nwoke ndị okenye nwere ike itolite na kilogram 65 ruo 80 (kilogram 29-36) ma tụọ 23-26 sentimita (58-66 cm) n'ịdị elu. Ndi nke nwanyi pere mpe pere mpe , dị arọ na 55-70 pound (25-32 n'arọ) na guzo 21-24 sentimita asatọ (53-61 cm) ogologo.
N'etiti etiti mmetuta a na-ewepụta ma buru oke ibu, Chesapeake Bay Retriever ekwesịghị ibi na ụlọ .
Ndi Chesapeake Bay Retrievers wụsịrị ọtụtụ?
Ndị na-arịa ọrịa nfụkasị, nke a nwere ike ọ bụghị ụdị kachasị mma maka gị, dịka CBR bụ nnukwu ndị wụdere ya .
Uwe mkpuchi ha dị ukwuu na-awụsịsị elu karịa oge opupu ihe ubi, mana ị ga-ahụ akwa ntutu Chessie dị mma na arịa gị n'afọ niile.
Chessies bụ canines na-adọrọ mmasị. Ha na-eme nke ọma n'ọtụtụ ezinụlọ, mana omume ha dị n'akụkụ oke.
Ha nwere aha ọma nke ịbụ kasị ukpeme nke retriever udiri anumanu . Ha nwere ike igwuri egwu ma nwee mmetụta ịhụnanya na ndị otu ha, mana ile ọbịa na-akwụsị ebe ahụ.
Na agbanyeghi na CBRs anaghị agba ụja nke ukwuu, ọdịdị nchedo ha na-eme ha nkịta nche zuru oke .
Chesapeake Bay Retrievers na-anọnyere ndị bịara abịa n’ogologo. Na mgbakwunye, ha anaghị anabatacha ndị enyi ọhụrụ canine. Ha na-eme nke ọma mgbe ha na anụmanụ ndị ọzọ zụlitere, mana anụ ụlọ na-amaghị ama?
Ha bụ ndị iro ma ọ bụ nri, na nkịta iwe bụ ezigbo ihe ga-ekwe omume .
Chefọdụ Chesapeake Bay Retrievers dị elu karịa ndị ọzọ. Echela na ị ga-eme obere ihe ma ọ bụrụ na Chessie nọọrọ onwe gị adịghị ka ọ nwere mmasị na nsị!
N'ụzọ megidere nke ahụ, ọbụnadị mmekọrịta CBR kachasị nke ọma yana ezinụlọ ya. Gị nwa akwụkwọ Chessie nwere ike ọ gaghị egosi ya mgbe niile, mana ọ chọghị ihe ọ bụla karịa ịbịaru gị nso.
N'ezie, ụdị a nwere ike igosi ihe ịrịba ama nke nkewa nchegbu ọ bụrụ na ha ahapụ naanị ha ogologo.
Ọ bụrụ na inwere ụmụaka, ị ga-achọ kuziri ha ka esi agụ asụsụ ahụ gị Chessie. Nke a dị mkpa karịsịa ma ọ bụrụ na ụmụ gị bụ, anyị ga-asị, na-anụ ọkụ n'obi na anụ ụlọ gị abụghị.
Imirikiti Chesapeake Bay Retrievers na-egwuri egwu nke ọma na ụmụaka nke ọgbọ niile, mana ha anaghị anabata ọtụtụ ụlọ siri ike. Ha bụkwa na-echekwa ihe nchebe , nke nwere ike ịpụta nsogbu nye ụmụaka na-amụ ije.
Na-elekọta oge a iji lekọta oge egwuregwu iji hụ na nchekwa onye ọ bụla.
Nwere ike ịmụ asụsụ nkịta gị, kwa. Mgbe ụfọdụ, ha nwere ike ịpụta ka ndị nwere obi ọjọọ ma ọ bụ ndị na-eme ihe ike, mana ha na-enwe ezigbo ọ toụ ịhụ gị.
A maara Chesapeake Bay Retrievers maka olu ha na “Chessie mụmụọ ọnụ ọchị.” Ọ bụrụ na ị chọpụta na Chessie na-agbachi egbugbere ọnụ ya ma na-agbachi ezé ya, ọ ga-abụ na ọ na-enwe nnukwu obi ụtọ na enweghị ike ịnwe ya.
Ekwetaghị anyị? Lelee ka Dakota the Chessie si asị ụmụ mmadụ chi ọbụbọ! O nwere ike iyi ihe na-eyi egwu na mbụ, mana oge adịghị anya, ịkwa ụta nke CBR gị ga-abụ akụkụ kachasị amasị gị n'ụbọchị.
Nke a nwere ike ịgaghị ekwu, mana CBRs abụghị ezigbo canine kachasị maka ndị nwe nkịta mbụ . Ndị a na - ewepụta ihe bụ nkịta dị egwu nke chọrọ nnukwu usoro iji dị mma.
Ọzụzụ na mmekọrịta mmadụ na ibe kwesịrị ịmalite n'oge ma gaa n'ihu n'oge ndụ ha niile. Lekwasị anya na mgbalị mbụ isi nrubeisi, okwu mmeghe kwesịrị ekwesị, na ịhapụ nduzi gị .
Akụkụ ikpeazụ a dị oke mkpa! Chọrọ ka onye isi ike gị Chesapeake Bay Retriever tụkwasị obi na nduzi gị oge niile, ọkachasị n'ọnọdụ ndị tara akpụ.
N'ịbụ ndị nwere onwe ha, Chessie nwere ọgụgụ isi nwere mmasị ịmụ ihe. Nkịta ndị a nwere uche na-arụsi ọrụ ike, n'ihi ya, ọzụzụ ekwesịghị ịbụ ihe siri ike na ụzọ ziri ezi.
Maka nsonaazụ kacha mma, na-ọzụzụ oge dị mkpirikpi ma na-atọ ụtọ. Chesapeake Bay Retrievers na-agwụ ike ngwa ngwa, yabụ na -eme usoro ọzụzụ ọzụzụ ha na egwuregwu okike na ihe egwuregwu .
Ike, imi, ma ọ bụ ọzụzụ bọọlụ niile bụ nhọrọ magburu onwe ya maka CBR! Nke a ga-eme nke ọma n'ọgwụgwọ, nyocha na nnapụta yana ọrụ ndị uwe ojii.
CBRs dị mfe ilekọta. Ha anaghị achọ mma dị ukwuu, mana ị ga-etinye oge dị ukwuu iji gosipụta ụdị a. Nọgide na-agụ iji chọpụta ego ole!
Olee otu esi edozi Chessie?
Dabere na ma Chessie gị bụ enyi ma ọ bụ nkịta na-arụ ọrụ, ha nwere ike ịchọ ma ọ bụ belata nlebara anya anya. Na nchịkọta, nke a bụ pụtara obere-mmezi izu.
Chessie nwa nkita
Ọ dịkarịa ala otu ugboro n'izu, ahịhịa gị Chessie’s ezé ma nyochaa ha ntị . Y’oburu n’ichoputa ihe nkpasu iwe ma obu oria, nye onye ogwu gi oku ka ichoputa ihe n’eme.
Ná nkezi, izu ụka kwa izu ga-ezuru. Ejila CBR saa ma ọ gwụla ma ọ dị ezigbo mkpa.
Chesapeake Bay Retrievers na nnweta mmiri ugboro ugboro-ọkachasị ndị ejiri ịchụ nta na iweghachị – nwere ike ịmalite isi mgbe oge na-aga. Ma ncha ntutu nwere ike imebi mmanụ nke uwe ha, nke nwere ike ịhapụ ha ka ọ ghara ịdaba na oyi.
Ikwesighi ịsacha ntutu nkịta gị ncha oge ọ bụla ha gara igwu mmiri, mana nweere onwe ha inye ha ezigbo itucha. Nke a nwere ike inye aka belata nkịta ọ bụla na-egbu oge na-adịghị mma ma dobe nkịta gị ọcha n'oge oge ịchụ nta.
Kedu nri kacha mma maka Chesapeake Bay Retriever?
Ọtụtụ ndị okenye Chessies chọrọ Olee ihe enyemaka 2 iko nri kwa ụbọchị . Chọọ maka akọrọ nkịta nri na a opekempe nke 20% protein ma ọ bụrụ na CBR gị nọ n'ọrụ.
Ga-achọkwa izere inye pupị puppịpị pup ma ọ bụ nri doggie na-adịghị mma. Chessies abughi udiri igbatu a emeso , ya mere kpachara anya ka ị ghara imeri ha.
Omume chọrọ maka Chesapeake Bay Retriever
Chesapeake Bay Retrievers bụ canines dị ike, na-arụsi ọrụ ike. A na-azụ ha maka ọrụ, yabụ ibi ndu otu ogwugwu abughi ihe ozo. Mee atụmatụ ọ dịkarịa ala otu awa na-emega ahụ kwa ụbọchị .
Dị nnọọ ka usoro ọzụzụ nke Chessie, usoro mmega ahụ ha ga-abụrịrị ihe na-atọ ụtọ. Ebe ụfọdụ nkịta na-enwe afọ ojuju na ịgagharị na-agagharị site na ogige ahụ, ịga ije ezughị maka Chesapeake Bay Retriever.
Igwu mmiri, ịwụ elu n'ọdụ ụgbọ mmiri, na ọbọgwụ ma ọ bụ ịchụ nta quail ka ọtụtụ ọsọ ha. Ihe omume a abughi nani na enyere Chessies aka ike, ha na-egbokwa mmuo miri emi.
Ọ bụrụ na ịchụ nta abụghị jam gị, weghachite egwuregwu (dị ka ịgbakwunye) bụ ihe nnọchi anya dị nso.
N'ihi ihe ndị mejupụtara Chesapeake Bay Retriever, ha zuru oke oyi na-atụ efere.
Oke ala nwere ike iru ala maka Chessie, ya mere kpachara anya na ihu igwe dị ọkụ. Debe mmega ahụ n'èzí n'ụtụtụ na mgbede, ma were Chessie gị maka igwu mmiri iji nyere ha aka ịjụ oyi.
Ndị CBR bụkarị ezigbo nwa. Na nkezi afọ ndụ nke 10-13 afọ, pooch a ga - edobe gị n’elu mkpịsị ụkwụ gị afọ iri ma ọ bụ karịa.
Ma dị ka nkịta niile, Chessies nọ n'ihe ize ndụ maka ọnọdụ ahụike karịa ndị ọzọ. Fọdụ n'ime ihe ndị kachasị gụnyere:
Bloat (nke a na-akpọkwa torsion ma ọ bụ gastric dilation volvulus)
Nsogbu anya , dị ka ọnyà ma ọ bụ atrophy retinal na-aga n'ihu (PRA)
Ọrịa Von Willebrand
Gbalisie ike idobe nwa akwụkwọ CBR gị maka mkpụrụ ndụ ihe nketa tupu ịzụta. Ga-achọ ịhazi nleta vet ọ bụla 6-12 ọnwa.
A sị ka e kwuwe, ọ dịghị iwu na-ekwu na Fido nwere ike ịhụ dọkịta nkịta naanị otu ugboro n'afọ. Na mgbe nile, nlekọta mgbochi bụ ụzọ kachasị mma iji mee ka nkịta gị nwee obi ụtọ na ahụike!
Chesapeake Bay Retriever mix ụmụ nkịta
Ssmụ Chessie na-efukarị $ 1400 USD na njedebe dị ala. Dabere na mkpofu ahihia na ihe omumu gi, ị nwere ike ịkwụ ụgwọ ihe karịrị $ 5000 USD maka otu n'ime furballs ndị a. Maka nkọwa, Chesapeake Bay Retriever litters bụkarị 10 ma ọ bụ nkịta.
Ozi ọma ahụ bụ na ị gaghị enwe nsogbu ọ bụla ịchọta Chesapeake Bay Retriever maka ọrịre. Akụkọ ọjọọ bụ na ị ga-akwụ ụgwọ aka na ụkwụ.
Chesapeake Bay Ndị na-azụ azụ na ụlọ dị iche iche
N'agbanyeghị ebe ị nọ na States, CBR breeders na kennels dị mfe ịchọta. Ma, ọ bụghị ihe niile breeds ka kere.
Chọọ ụlọ nkịta nke pụrụ iche na Chesapeake Bay Retrievers. Jụọ ọtụtụ ajụjụ ị nwere ike iche iji chọpụta nka nke onye na-azụ gị.
I kwesịkwara jụọ maka asambodo ahụike maka nwa gi na nne na nna ya. Wantchọrọ ijide n'aka na nkịta gị si na ngwaahịa dị mma.
Njikere ịmalite ntụtụ pennies na ịchekwa ego maka ọmarịcha Chessie pup? Ndị a bụ ụfọdụ ndị na-azụ azụ iji wụgharịa nyocha gị:
Desert Winds Chesapeake Bay na-ewepụta (Ranchita, CA)
Ogologo LongMeadow (Dover, PA)
Chesapeake Bay napụtara
Na-eche echiche banyere ịnabata Chessie gị? Zụta nwa nnapụta bụ nnukwu ụzọ iji nye nkịta ohere nke abụọ na ndụ. Ọ dịkwa nnọọ mfe na eriri akpa gị!
CBR bụ nkịta a ma ama, mana na-ama aka. Maka nke a, o yikarịrị ka ị gaghị enwe nsogbu ọ bụla ịchọta onye ọ bụla chọrọ ụlọ ebighi ebi.
Malite na ụlọ obibi, mana dị njikere ịgbasa usoro ọchụchọ gị ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Lelee nnapụta CBR ndị a maka echiche nke ihe nkịta dị ugbu a:
Chesapeake Ebe Nchekwa (Amherst, MA)
Chesapeake Bay Retriever Relief & Nnapụta (Poquoson, VA)
ACC Nnapụta (Ogige Ubi, ID)
A na-eji Chess atụ tụnyere Labrador weghachite , ma olee otu nha anya na ụdị anụ ọhịa ndị a?
E kere nkịta abụọ a ka ha jee ozi dị ka ndị na-achụ nta na ndị ọkụ azụ. Ka o siri dị, ụlọ nyocha na CBR bụ ndị na - ewepụta ihe pụrụ iche ma na - enwe ọ enjoyụ n’ọrụ.
Na mgbakwunye, ha abụọ hụrụ mmiri n'anya ma nwekọrịta otu ụdị, yana Chessie buru ibu.
Ihe dị iche n'etiti ụdị anụ ọhịa ndị a bụ ọnọdụ ha.
Na Labrador bụ ezigbo enyi karịa Chessie. Lablọ nyocha na-ahụ onye ọbịbịa ma enweghị ike ichere izute enyi ọhụrụ ha kachasị mma. CBR hụrụ onye ọbịbịa na enweghị ike ichere iji chebe ezinụlọ.
N'akụkụ ndị ahụ, Labradors na-enwekarị obi ụtọ na ịdị nro. N'aka nke ọzọ, Chesapeake Bay Retriever dị obere.
Ndị nkịta na-achọ onye na-eche nche na-arụ ọrụ ga-ahọrọ Chessie. Mana ọ bụrụ na ị nọ n'ahịa maka pooch nke agbata obi, Chummy Labrador Retriever bụ nhọrọ siri ike.
Chesapeake Bay Retrievers bụ canines pụrụ iche. N'ịga oyi oyi nke mmiri mmiri Maryland, ndị Chessie gafere atụmanya ma nweta aha aha na-akwadoghị 'Toughest retriever.'
Mgbe anyị kwuru siri ike, anyị na-ekwu ya. Ndị CBR dị njikere oge niile iji weghachite ma ọ bụ chebe, ha ga-eme nke ọma na ndị nwe ha maara etu esi ejikwa mkpali ha.
Chee na ị nwere ike ịmakọ na mmụọ obi siri ike nke Chessie? Ọ ga-amasị anyị ịnụ banyere ya na nkwupụta!
Red Husky: Ihe niile I Kwesịrị Knowmara Banyere Husky Red Siberia
Ihe niile ịchọrọ ịma tupu ị nweta nkịta Jack Chi
ka nnukwu alalamkan malamutes na -esi
nkịta siri ike aha nwoke pitbull
esi etinye ihe nkpuchi ahụ na nkịta
onye ọzụzụ atụrụ Australia na -acha anụnụ anụnụ na -agwakọta ụmụ nkịta
American mix bull lab mix